Kpọtụrụ anyị - Hebei Kingmetal Flange Ma Dabara Adaba Manufacturing Co., Ltd.
A na-ebupụ ngwaahịa anyị n'ụwa niile. Ndị ahịa anyị nwere afọ ojuju na mma anyị nwere ntụkwasị obi, ọrụ ndị ahịa na ahịa ahịa. Ebumnuche anyị bụ "ịnọgide na-eme ka iguzosi ike n'ihe gị site na ịrara mbọ anyị na-aga n'ihu na mbido ngwaahịa na ọrụ anyị oge niile iji hụ na afọ ojuju nke ndị ọrụ njedebe, ndị ahịa, ndị ọrụ, ndị na-eweta ngwaahịa na obodo ụwa niile anyị na-arụkọ ọrụ ọnụ".
xizhaotong ulo oru ogige, shijiazhuang obodo, hebei, china
Ndị ọrụ anyị na-agbaso mmụọ nke "nguzosi ike n'ezi ihe na mmekọrịta mmekọrịta," na ụkpụrụ nke "Ogologo klaasị mbụ na ezigbo ọrụ". Dịka mkpa nke ndị ahịa ọ bụla, anyị na-enye ọrụ ahaziri iche na nkeonwe iji nyere ndị ahịa aka imezu ebumnuche ha nke ọma. Nabata ndị ahịa si n'ụlọ na mba ofesi ịkpọ ma jụọ!
KPUTA ANY C Kpọọ anyị
Biko kpọtụrụ anyị site na iziga anyị ozi ịntanetị ma ọ bụ kpọọ anyị ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ụlọ ọrụ anyị. o nwekwara ike inweta ozi adreesị anyị na ibe weebụ anyị wee bịa na ụlọ ọrụ anyị iji nweta nyocha nyocha nke ngwa ahịa anyị. Obi siri anyị ike na anyị ga-ekerịta mmezu ma mepụta mmekọrịta mmekọrịta siri ike na ndị otu anyị na ahịa a. Anyị na-achọ ajụjụ gị.
ANA-AH ATTA NA 9AM TO 6PM